Ingxelo yeApple kwiintlawulo zerhafu | Ndisuka mac
Isiteyitimenti se-Apple sentlawulo yerhafu
Kule veki sibone kumaphephandaba kwihlabathi liphela, nokuba zetekhnoloji okanye akunjalo, iindaba malunga nokuhlawulwa kweerhafu ezenziwe yiApple. Kwingxelo esiye satsho ukuba ndivela eMac, yaboniswa loo nto Inkampani yaseCupertino yayishiya ngandlela thile ngokusemthethweni ukuhlawula irhafu.
Uxinzelelo lwe-EU ngu-Apple ngokuzibandakanya "Amaphepha eParadesi" sisihloko seli nqaku esipapashwe ngugxa wethu uJavier Labrador, ngokukhawuleza u-Apple uphendula nge ingxelo esemthethweni esinokuthi siyifunde ngokupheleleyo emva kokutsiba.
Sele silumkisile ukuba luxwebhu olude kwaye iApple iphendula ngqo kwiingxelo zeInternational Consortium yaBaphengululi beNtatheli ukusukela kwezi ngxelo ngokwenkampani yeCupertino bavela ezingachanekanga. Le yingxelo epheleleyo:
U-Apple ukholelwa ukuba zonke iinkampani zinoxanduva lokuhlawula iirhafu, kwaye njengomhlawuli werhafu omkhulu emhlabeni, uApple uhlawula yonke idola ayityalayo kwilizwe ngalinye emhlabeni. Siyazingca ngegalelo lethu lemali kuluntu esisebenza kulo.
Kolu xwebhu sinikezela uthotho lwenyani ukuphendula iingxelo ezivela kwiZizwe eziManyeneyo zoPhando lweeNtatheli. Kuba ezi ngxelo zibonakala zingachanekanga.
Utshintsho olwenziwe yi-Apple kulwakhiwo lwayo ngo-2015 lwaluyilelwe ngokukodwa ukugcina intlawulo yalo irhafu e-United States, hayi ukunciphisa iirhafu kwenye indawo. Akukho msebenzi okanye utyalomali olususwe eIreland.
Kude kude nokuhlala "kungenakufikelelwa yiMelika," uApple ubhatala i-US iibhiliyoni zeedola kwiirhafu kumthetho osemthethweni weepesenti ezingama-35 kwirhafu kwingeniso evela kutyalo-mali lwemali ephesheya.
Ireyithi esebenzayo ye-Apple kwingeniso yayo yaphesheya yipesenti ezingama-21, ibalwa ngokulula kwiingxelo zoluntu zenkampani. Lo mfo ubambe ngokungagungqiyo iminyaka emininzi.
Kwinyanga ephelileyo, ephendula imibuzo evela kwi-ICIJ, New York Times, nakwezinye iindawo, uApple wenza le ngxelo ilandelayo:
"Ingxoxo-mpikiswano malunga nerhafu ye-Apple ayimalanga nokuba sihlawula malini, kodwa kufuneka siyibhatale phi. Como onegalelo elikhulu emhlabeniSihlawule ngaphezulu kwe- $ 35.000 yezigidigidi kwirhafu yombutho kule minyaka mithathu idlulileyo, kunye neebhiliyoni zeedola ezongezelelweyo kwiirhafu zerhafu, imirhumo yomvuzo, irhafu yentengiso, kunye neVAT. Siyakholelwa ekubeni onke amashishini anoxanduva lokuhlawula irhafu, kwaye siyazingca ngegalelo lethu lemali kuluntu esisebenza kulo.
Ngaphantsi kwenkqubo yangoku yerhafu yamazwe, iirhafu kwinzuzo ziyavavanywa apho kuveliswa khona ixabiso. Iirhafu ezihlawulwa ngu-Apple kumazwe kwihlabathi liphela zisekwe kulo mgaqo. Uninzi lwexabiso leemveliso zethu ngaphandle kwamathandabuzo lwenziwe eMelika, apho siqhuba khona uyilo, uphuhliso, ubunjineli kunye neminye imisebenzi emininzi, uninzi lwerhafu ekufuneka ihlawulwe eUnited States.
Xa i-Ireland yatshintsha umthetho werhafu ngo-2015, sawuthobela ngokutshintsha indawo esihlala kuyo saza saxela e-Ireland, kwiKhomishini yaseYurophu naseMelika. Olu tshintsho alwenzelwanga ukunciphisa iintlawulo zethu zerhafu kulo naliphi na ilizwe. Ngapha koko, iintlawulo zethu eIreland zikhuphuke kakhulu, kwaye kule minyaka mithathu idlulileyo sihlawule i-1.500 yezigidigidi zeerhafu apha, iipesenti ezisixhenxe zento yonke eli lizwe eliyiqokelele kwirhafu yomdibaniso. Utshintsho lwethu luqinisekise ukuba izibophelelo zerhafu eMelika azincitshiswanga
Siyazi ukuba abanye abantu bangathanda ukutshintsha inkqubo yerhafu ukuze irhafu yamazwe ngamazwe isasazwe ngokwahlukeneyo kumazwe asebenza kuwo, kwaye siyazi ukuba abantu abalinganayo ngokulinganayo banokuba nemibono eyahlukileyo malunga nendlela ekufanele ukuba isetyenziswe ngayo kwixesha elizayo. Kwa-Apple siyahambelana nomthetho, kwaye ukuba inkqubo iyatshintsha siya kuyithobela. Siyazixhasa ngamandla iinzame zoluntu lwehlabathi malunga nohlaziyo olubanzi lwerhafu yamazwe kunye nenkqubo elula kakhulu, kwaye sizakuqhubeka nokuzikhusela ezi njongo.
Ulwazi oluthe kratya ngentlawulo ye-Apple
Kuyo yonke imbali, iApple iyile iimveliso ezintsha kunye nemizi-mveliso egxile kwinto entsha. Umsebenzi onzima kunye nokuzinikezela kukhokelele ekudalweni kwemveliso kunye neenkonzo eziye zabuphucula kakhulu ubomi babantu kwaye zadala izigidi zemisebenzi kwihlabathi liphela.
Ukurhafiswa kweenkampani zamazwe ngamazwe kunzima, kodwa kukho umgaqo osisiseko owamkelweyo kwihlabathi liphela: iinzuzo zenkampani zirhafiswa ngokwexabiso elivelisiweyo. Umbutho weNtsebenziswano yezoQoqosho noPhuhliso, eIreland, eUnited States nakwamanye amaziko ayavumelana ngalo mthetho-siseko.
1. I-Apple lelona galelo likhulu ehlabathini, kwaye uhlawule ngaphezulu kwe- $ 35.000 yezigidigidi kwirhafu yecandelo kule minyaka mithathu idlulileyo. I-Apple ihlawula irhafu kuwo onke amazwe ethengisa kuwo iimveliso zayo.
Xa umthengi ethenga imveliso yeApple ngaphandle kwe-United States, iirhafu zihlawuliswa okokuqala kwilizwe apho kuthengiswa khona. U-Apple ke uhlawula irhafu e-Ireland, apho inxenye yabasebenzi abangama-6.000 abasebenza apho benza intengiso kunye nokusasaza kuka-Apple. Iirhafu ezongeziweyo zase-US zikwakhona xa inzuzo ibuyiswa kwilizwe labo.
Inqanaba lerhafu elisebenzayo le-Apple kwihlabathi liphela ngama-24,6 eepesenti, ngaphezulu komndilili wamazwe aphesheya e-US.
2. Uninzi lwexabiso leemveliso zeApple lwenziwa eMelika, apho uyilo, uphuhliso, ubunjineli kunye neminye imisebenzi yenziwa khona. Kungenxa yoko le nto, phantsi kwenkqubo yangoku yerhafu, uninzi lweerhafu ze-Apple kufuneka zihlawulwe eMelika.
Ku uxwebhu lwesalathiso Kunyaka ophelileyo, uNondyebo wase-US waphakamisa inkxalabo malunga neenzame zabalawuli baseYurophu zokurhafisa imali engeyeMelika. “Kangangokuba le rhafu yamanye amazwe inyanzeliswa kwingeniso ekungafanelekanga ukuba ichaphazeleke liLungu leLungu ekuthethwa ngalo, esi siphumo siyakhathaza, kuba ngokwenyani oko bekuya kuba kukudlulisela umvuzo kwi-European Union ngurhulumente we-United. Amazwe kunye nabarhafi. "
3. I-Apple inemali phesheya kuba kulapho ithengisa khona uninzi lweemveliso zayo. Ngaphantsi kwenkqubo yangoku yerhafu, iingeniso zerhafu yasemva kokuthengiswa kwamanye amazwe zihlawuliswa eUnited States. I-Apple ibonelele ngaphezulu kwe- $ 36.000 yezigidigidi ukuhlawula iirhafu ezimiselweyo eMelika. Oku kongezwe kwi-35.000 yeebhiliyoni zeedola inkampani ehlawule ngayo kwirhafu yomdibaniso kule minyaka mithathu idlulileyo.
I-Apple ikhule ukusuka kubasebenzi abangama-60 eIreland ngo-1980 ukuya kuma-6.000 namhlanje.
Indawo yeCork igcina zonke iintlobo zokusebenza, ukusuka kwinkonzo yabathengi ukuya kwintengiso, ezemali, ezokusebenza, ezokuvelisa kunye nokunye. Abasebenzi be-Cork abangama-6.000 babonisa ubuzwe obungaphezulu kwama-90.
4. I-Apple ibisebenza eIreland ukusukela ngo-1980, xa uSteve Jobs wakhangela isiseko sokwandisa ngaphandle kweMelika. Indawo yaseCork, eIreland yaqala ngabasebenzi abangama-60 kwaye ngoku ingaphezulu kwama-6.000. Ubuchule buka-Apple kunye nenkxaso yotyalo-mali eminye imisebenzi eyi-12.000 e-Ireland. EYurophu iyonke, iApple ixhasa imisebenzi engaphezulu kwesigidi esi-1,5.
Xa i-Ireland yatshintsha umthetho werhafu ngo-2015, u-Apple wenza iinguqu kubume bayo ukuze awuthobele. Ukusukela ngoko, yonke imisebenzi ka-Apple eIreland yayiqhutywa ziinkampani ezikweli lizwe. I-Apple ihlawula irhafu kwinqanaba elisemthethweni laseIreland leepesenti ezili-12,5.
Njengenxalenye yolu tshintsho, inkxaso-mali ka-Apple ephethe imali ephesheya iye yaxhomekeka eBritane kwiJersey. ngenjongo ethile yokuqinisekisa ukuba izibophelelo zerhafu kunye neentlawulo eziya eMelika azincitshiswanga. Ukusukela ngoko iApple ihlawule amawaka ezigidi zeerandi e-United States kwingeniso yotyalo-mali yale nkxaso-mali. U-Apple akanazo naziphi na izibonelelo zerhafu ngenxa yolu tshintsho kwaye, okubaluleke kakhulu, u-Apple akayibonanga intlawulo yakhe okanye uxanduva lwerhafu luyancitshiswa nakweliphi na ilizwe ngesi sizathu.
5. U-Apple ukholelwa ekubeni kubalulekile ukuba kubekho uhlengahlengiso kwirhafu yamanye amazwe, kwaye ebekhuthaza iminyaka ukuba yenze lula imimiselo yerhafu. Uhlengahlengiso oluvumela intshukumo yasimahla yenkunzi iya kukhawulezisa ukukhula koqoqosho kunye negalelo ekudalweni kwemisebenzi. Iprojekthi yowiso-mthetho elungelelanisiweyo kwilizwe liphela iyakuphelisa ukungqubana okukhoyo phakathi kwamazwe malunga nerhafu kwaye iya kuqinisekisa ukhuseleko olusemthethweni kubahlawuli berhafu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Isiteyitimenti se-Apple sentlawulo yerhafu
IZiko labandwendweli iApple Park sele linomhla wokuvula esidlangalaleni
IPodcast 9 × 09: I-iPhone X ibangela uvakalelo